Dhaqtar Tiri Maaski-kan Ma Ahan ka Hortag..Waa Waji Qurxin Un | Xaqiiqonews
Dhaqtar Tiri Maaski-kan Ma Ahan ka Hortag..Waa Waji Qurxin Un
Dhaqtar ahna cilmi baare caafimaad oo ka tirsan jaamacadda Ameerikaanka ah ee George Washington haweeneyda lagu magacaabo Lina Weyne ayaa sheegtay in maaskarahan ay dadku ay xiran jireen labadii sano ee la soo dhaafay ka hortagga fayruska Karoona dartiis uusan waxba tareyn marka la joogo nooca cusub ee fayruska Omikroon.
Dhaqaatiirta ayaa wili baaris ku wada nooca cusub ee Fayruska Karoonaha kaasi oo markii ugu horeysay lagu arka dalka Koonfur Afrika. iyada oo xogta kaliya ilaa hadda laga haayo noocan cusub ay tahay in uu ka faafis badan yahay kuwii hore oo dhan.
Dhaqtar Lina Weyne oo ah baare ku takhasustay caafimaadka ayaa sheegtay in aysan waxba tareyn xirashada Maaskarayaasha dharka ka sameysan iyada oo tiri: kaliya waa un dhikoreeshin waji qurxin waxba kama badali karo waaqica dhabta ah ee nooca cusub fayruska ee Omikroon.
Waxa ay xustay in loo baahan yahay maaskaro ugu yaraan ka sameysan saddex lakab waxa ayna soo jeedisay in ay dadku xirtaan maaskaraha caafimaadka ee caanka ku ah midibka buluugga ah.
Khabiirkan caafimaad waxa ay tilmaameysa muhiimadda uu leeyahay maaskaraha caafimaad kaasi oo leh kimikada “Polypropylene” oo ah maado ka hortagta waxyaalaha aadka u yar yar.
Si kastaba ha ahaatee waxtarka maaskiga ayaa ku xirin mar walbo qaabka qofka u xirto, waxaana habboon in qofka uu u xirto si sax ah, iyada oo ay jirto in dad badani maaskigan bullugga ah ay ku xirtaan wixii sanka ka hooseeya, markaasi oo uu maskiga waxba kuu tareynin.
Dadka aaminsan fikradda shirqoolka “conspiracy theory” waxa ay aaminsanyihiin uusan waxba tari karin maaskiga, waxaa kale oo dadkani aaminsan yihiin in Fayruska Karoona uu yahay waxba kama jiraan ama ay ka badbadis ku sameysay warbaahinta.
War Cusub Oo Aan Qorno Idinma Heyno !!
Abaaraha dalka, damaca Farmaajo iyo muranka doorashooyinka, xil ka qaadista gudoomiyaha guddiga doorashooyinka iyo dallacsiinta saraakiisha booliska, dhammantood waa...
Dhaqtar ahna cilmi baare caafimaad oo ka tirsan jaamacadda Ameerikaanka ah ee George Washington haweeneyda lagu magacaabo Lina Weyne...